Mogadishu Journal » 2019 » November » 7
Shan nin oo dil toogasho ah lagu fuliyay Boosaaso
Mjournal :-Maxkamada Ciidamada Puntland, ayaa dil-toogasho ah ku fulisay 5 nin oo lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururadda Al-shabaab iyo Daacish. Ragga la toogtay ayaa waxay mudo ku xirnaayeen xabsiga magaaladda Boosaaso, waxaana ciidamada ammnigu ay horay uga soo qabqabteen...
Sheekh Shariif “Ma aqbaleyno ciidamo gaar ah oo dad dhibaateeyo
Mjournal :-Shariif Sheekh Axmed Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran ayaa sheegay inay qatar weyn ka soo socoto dhismaha Ciidamada qalabka sida, isagoo xusay in Nabadsugida ay bilowday inay ciidamo qorato. Waxaa uu sheegay in uu shaki badan ka qabo qaabka loo qoraayo Ciidankaan...
Mjournal :-Dowladda Mareykanka ayaa markii u horeysay war saxaafadeed ka soo saartay xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya oo bilihii la soo dhaafay gashay marxalado aan la fileyn oo ka dhashay khilaafka dowladda Federaalka, dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka. War...
Mjournal :-Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo) ayaa sheegay in aysan “sharci ahayn” codkii maanta Baarlamanka ee xilka looga xayuubiyay. Gudoomiyaha oo la hadlay BBC Waxaa uu sidoo kale tilmaamay in uu wali yahay Gudoomiyaha Sharciga ah ee...
Mjournal :-Kadib markii Maanta Xildhibaannada Baarlamaanka Puntland ay xilkii ka qaadeen Guddoomiyihii Baarlamaanka Puntland Cabdi Xakiin Dhoobo-daareed ayaa waxaa la Magacaabey guddi ka Shaqeyn doona doorashada Guddoomiyaha Cusub ee Baarlamaanka Puntland. Gudoomiye ku xigeenka...
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo xilkii laga qaaday
Mjournal :-Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ayaa goor dhow xilka ka qaaday Guddoomiyihii Baarlamaanka C/xakiin Dhoobo Daareed, kaddib mooshin ay ka keeneen. Fadhi goor dhow ay Xildhibaanada ku yeesheen xarunta Baarlamaanka ayaa waxaa soo xaadiray 53 Xildhibaan, iyadoo uu shir...
Mooshin laga gudbiyey Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland
Mjournal :-Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee baarlamanka Puntalnd Abuukaate Cabdicasiis ayaa sheegay in uu qabtay mooshin ka dhan ah gudoomiyaha Baarlamanka Puntalnd, Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo). Waxaa uu sheegay in 44 xildhibaan ay saxiixeen mooshinka ka dhan ka ah...
Iska horimaad xalay ka dhacay xarunta Baarlamaanka Puntland
Mjournal :-Taliska ugu sareeysa Booliska Dowlad Goboleedka Puntland ayaa si kulul waxaa ay uga hadleen dagaal sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo xalay ka dhacay Xarunta Baarlamaanka Puntland ee Magaalada Garoowe. Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay Saddex Ruux,waxaana la...